प्रतिव्यक्ति दैनिक १३५ लिटर पानी आवश्यक, पाउँछन् २० लिटर मात्रै
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) का अनुसार काठमाडौंमा एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन १३५ लिटर पानी आवश्यक पर्छ ।यो आधारमा उपत्यकाका ३० लाख जनसंख्यालाई दैनिक ४२ करोड लिटर पानी आवश्यक पर्छ । तर, केयुकेएलसँग अहिले प्रतिदि�
पुरुषले खाने गर्भनिरोधक चक्की : 'कन्डम र भ्यासेक्टमी मात्रै रहेको अवस्थामा यो चक्की स्वागतयोग्य हुनेछ'
&nbsp;पुरुषले सेवन गर्ने गर्भनिरोधक चक्की मानवमा गरिने सुरक्षासम्बन्धी प्रारम्भिक परीक्षणमा सफल भएको दाबी एउटा प्रसिद्ध चिकित्सकीय सम्मेलनमा दाबी गरिएको छ। दैनिक एक चोटि सेवन गर्नुपर्ने सो चक्कीमा शुक्रकीटको उत्पादन रोक्ने ह
&nbsp;खानाको स्वाद बढाउन हरियो खुर्सानी प्रयोग गर्ने गरिन्छ । भिटामिन ए, बी&ndash;६, आइरन, पोटासियम, प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेड प्रशस्त मात्रामा पाइने हरियो खुर्सानी अब स्वादको लागि मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि पनि महत्वपूर्ण गुणले भरिप�
सरकारी अस्पतालको दुर्दशा : एउटै बेडमा राखेर महिला–पुरुषको उपचार !
काठमाडौं । भारतीय सरकारी अस्पतालको अवस्था नाजुक देखिएको छ । भारतको मध्य प्रदेश राज्यमा अहिले सरकारी अस्पतालमा बेड अभाव भएको देखिएको हो । सरकारी महाराजा यशवन्तराव अस्पताल (एमवाईएच)मा एक अपमानजनकता दृश्य देखिएको छ । आर्थोपेडिक
दुई पोटी लसुन र एक गिलास पानी खानुहोस्, यी रोगबाट बच्नुहोस्
लसुन प्राय हामीले तरकारी पकाउँदा प्रयोग गर्ने गर्छौ तर यसका स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै गुणबाट हामीमध्ये सायद थोरै मात्रै जानकार छौँ। लसुन तरकारीमा प्रयोग गर्नका लागी मात्र उपयुक्त नभइ औषधीका रूपमा समेत निकै उपयोगी मानिन्छ। लस�
रातिको समय भन्दा बिहानको समय सेक्स गर्नु किन राम्रो मानिन्छ ?
यदि तपाईंसँग सोधियोस् कि सेक्स गर्ने बेस्ट समय कुन हो भने सायद तपाईंसँग यसको कुनै ठोस उत्तर नहोला । तर, हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार मर्निंग सेक्सलाई राम्रो मानिएको छ । किनकी बिहानको समय सेक्स गर्नाले मुटु स्वास्थ्य राम्रो हुन�
कपाल झर्छ ? कपाल बलीयो बनाउने याे हाे एक मात्र तरीका !
प्याजमा एन्टिसेप्टिक गुण हुन्छ । प्याजको रस कपालमा लगाएर केही मिनेट पछि धुनाले कपाल बलियो र चम्किलो हुन्छ । खोइरो (एलोपेसिया) लागेका मानिसका लागि प्याजको रस कपालमा लगाउनु लभदायक हुन्छ। गाजर : गाजरमा बेटा क्यारोटिन प्रशस्त मात�
गर्भावस्था संवेदनशील अवस्था हो । गर्भावस्थामा महिलामा थुप्रै परिवर्तन देखापर्छन्।खासगरी शरीरका अंगमा लचिलोपन आउने भएकाले पनि शारीरिक परिवर्तन देखापरेका हुन् । सामान्यतया समय बित्दै जाँदा गर्भको आकार पनि बढ्दै जाने गर्छ। �
आँखा जचाउन अस्पताल पुगेका युवाकाे उपचारपछि ज्याेति नै गुमेपछि ...
आँखा उपचार केन्द्र दुहबीको लापरबाहीका&nbsp; कारण एक युवाले&nbsp;आफ्नाे दृस्टि गुमाएकाे भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय दुहबीमा उजुरी दिएका छन । दुहबी ६ निवासी १९ बर्षिय सागर हलुवाइले उपचारकाे क्रममा अस्पतालकाे लापर्वाहीले आफ्नाे&nbsp;आँ
के तपाइकि श्रीमती रिसाएकि छिन ? यसता छन फकाउने उपाय
पसिना गन्हाउँछ ? नखानुहोस यस्ता खानेकुरा
धेरै मानिसहरुमा काखी वा शरिरको विभिन्न ठाँउमा आएको पसिना गन्हानउने समस्या हुन्छ । जसले गर्दा टाढाको बाटो हिड्दा होस् या सामान्य काम गर्दा गदै हामी साथीहरुबाट अपहेलित हुन्छौ । त्यसैले धेरै मानिसहरु गर्मीको मौसममा सेन्ट लगाउन
कलेजोले गर्ने काममा मदिराले यसरी गर्छ हानी
पछिल्लो समय कलेजोसम्बन्धी समस्या हुने मानिसको संख्या बढ्दो छ। जसको मुख्य कारण मदिराजन्य पदार्थ हो।रक्सीले कलेजो, मुटु, मस्तिष्क, आन्द्रा तथा खानेनली आदिमा असर गर्छ। यो जानकारी आजको&nbsp;नयाँ पत्रिका दैनिकमा डा.जीवेश्वरलाल झाले �
मेवाको चोप पनि यस्तो शक्तिशाली ?
छालाको सुन्दरताले मानिसलाई आकर्षक बनाउँछ र हरेक मानिस सुन्दर बन्न चाहान्छ । विशेष गरि अनुहार, घाँटी, हात, खुट्टाको छाला बाहिर देखिने हुँदा त्यो मानिसको व्यक्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले मानिसहरु छालाको सुन्दरतालाई लिएर स�
किन जाने डेण्टल ? घरमा बसि बसि यसरी चम्काउनुहोस पहेँलो दाँत लाई
दांत शरीरको महत्त्वपूर्ण अंग त हो नै, सौन्दर्यमा पनि दांतले ठूलो प्रभाव पार्छ। मिलेका र सेता, चम्किला दांतले व्यक्तिको सुन्दरतामा निखार ल्याउँछ। दांतलाई सेतो र चम्किलो बनाउनको लागि आजकल नयाँ प्रविधिहरु प्रयोग गरिन्छ। तर यहा�
माेटाकाे माेटाइ एनजीओ,उता मुसहर समुदाय भने भोकभोकै
देशमा अनेक राजनीतिक परिवर्तन आए पनि तराईका दलितमध्ये सबैभन्दा पिछडिएका मुसहर समुदायको अबस्था उस्तै छ।उनीहरु शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थामा अझै पछाडि छन्। सरकारले दलित समुदायको उत्थानको लागि भन्दै वार्षीक करोडौँ रुपैय
के हो मेनेन्जाइटिस ? कस्ता हुन्छन् यसका लक्षण ?
दिमागबाट आउने मुख्य नसा जसलाई स्पाइनल कर्ड भनिन्छ।स्पाइनल कर्डवरपर झिल्ली हुन्छन्। ती झिल्लीमा संक्रमण भएमा मेनेन्जाइटिस हुन्छ। यो जानकारी आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका नसा रोग विशेषज्ञ डा.विक्रम गजुर�
सामान्यतया शरीरको कुनै भागमा कोषिकाहरु अनियन्त्रित भएर बढ्नुलाई क्यान्सर भएको मानिन्छ। नाक, कान र घाँटीमा पनि विभिन्न समस्याका कारण क्यान्सर हुन सक्छ। यो जानकारी आजको&nbsp;नयाँ पत्रिका दैनिकमा नाक, कान र घाँटी रोग विशेषज्ञ डा.मा
प्रकाशित मितिः असार 8, 2076
मान्छेलाई सुटुक्कै मार्ने क्यान्सरमा पर्छ, अण्डाशयको क्यान्सर। यो महिलाहरुमा बढी हुन्छ। यो क्यान्सर भएको सुरुमै थाहा हुँदैन। यो जानकारी आजको&nbsp;नगारिक देनिकले छापेको छ। पेट डम्म फुल्ने, पेट बढ्दै जाने, खानामा रुचि नहुने, पेटम�
‘इनर्जी ड्रिंक्स’ आयातमा प्रतिबन्ध
सरकारले क्याफिनयुक्त शक्तिवर्द्धक पेयपदार्थ (इनर्जी ड्रिंक्स र फ्लेवर सेन्थेटिक ड्रिंक्सलगायत पेयपदार्थको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी क्याफिनयुक्त शक्त
के कारणले फेल हुन्छ मिर्गौला ? जोगाउने कसरी ?
शरीरमा रगत शुद्ध पार्ने प्रमुख अंग हो, मिर्गौला।यो बिस्तारै काम नलाग्ने हुँदै गएको धेरैलाई थाहा हुँदैन। मिर्गौलामा समस्या आउँदा सुरुसुरुमा कुनै लक्षण देखिँदैन। जब लक्षण देखापर्न थाल्छन्, त्यतिबेला मिर्गौला ६० देखि ७० प्रति�